Bafuna ukuzikhulisela usana abaluthole emotweni
UFUNA ukuzikhulisela ingane umndeni waseMlalazi, eShowe, othole ingane ezelwe nengaziwa, ebishiywe emotweni ebipakiwe egcekeni.
UMnuz Mthandeni Nzuza, utshele Isolezwe ukuthi ubeyodumisa imoto yakhe eyiveni ebipake egcekeni ekuseni ngoMgqibelo ngesikhathi ezithela phezu kwengane ebishiywe ngemuva kweveni lakhe.
Uthe uqale wanengeka ezitshela ukuthi yindodakazi yakhe esanda kubeletha, eshiye ingane evenini.
“Ngabo-8 ekuseni besiya edolobheni nezingane ngoba ngiyozithengela amakhava ezincwadi. Ngiyodumisa imoto ngezwa kukhala ingane, ngimangele ukuthi ingane ifunani evenini ngemuva. Ngibe senginengeka ngithi indodakazi yami enengane enezinyanga ezimbili eyibeke khona,” kusho uNzuza.
Uthe kube isikhashana kwafika izingane abezohamba nazo, wazibuza ukuthi ingane ibekelweni emotweni.
Uthe zimangele nje izingane, njengoba ingane encane beziyishiye endlini.
“Siqale lapho satatazela sibona ukuthi ingane ayaziwa, sabuza indodana wami ukuthi ayikho yini intombazane ayikhulelisile. Nayo walandula. Sibe sesiyigeza, sayigqokisa. Safonela amaphoyisa nabezimo eziphuthumayo bayihambisa esibhedlela,” kusho uNzuza.
Uthe indodakazi yakhe enengane enezinyanga ezimbili, ifuna ukuyigcina lengane.
“Njengomndeni yize singenakho okutheni kodwa singayikhulisa le ngane. Inhliziyo yethu ithintekile kakhulu ngale nto, ngoba asazi kungani ishiywe lapha. Indodakazi yami ithe yona izokwazi ukuyikhulisa njengengane yayo, ngoba vele inayo enye encane,” kusho uNzuza.
Uthe okwamanje ingane igcinwe esibhedlela, osonhlalakahle kulindeleke ukuthi balandele udaba lwayo ngoba ngempelasonto bebengekho emsebenzini.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa aseShowe aphenya icala lokulahlwa kwengane.